सन्चो क्लिनिकले दियो प्रहरीलाई स्वास्थ्य सामग्री- बजार - कान्तिपुर समाचार
सन्चो क्लिनिकले दियो प्रहरीलाई स्वास्थ्य सामग्री
काठमाडौँ — डा. सन्चो क्लिनिकले महानगरिय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । क्लिनिकका निर्देशक जेन श्रेष्ठले आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
क्लिनिकले परिसरलाई ५ सय थान सेनिटाइजर, २५ सय थान माक्स, १५ सय पिस पन्जा, भिटामिन सी एक हजार वटा र भिटामीन बी कम्प्लेक्स १२ सय वटा हस्तान्तरण गरेको हो ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर क्लिनिकले नि:शुल्क रुपमा समय समयमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । कोरोना महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र पत्रकारलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउदै आएको पनि उनले बताए ।
प्रहरी परिसरको मागअनुसार स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर प्रहरीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने पनि जनाइएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ १५:१५
प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक विपक्षीद्वारा अवरुद्ध
जेष्ठ २५, २०७८ सन्तोष सिंह
धनुषा — प्रदेश २ का विपक्षी दलका सांसदहरुले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पठाएको शसर्त बजेटमा मनपरी गरेको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । स्थानीय तहलाई आर्थिक मसान्तको अन्तिम समयमा पठाएको शसर्त अनुदान सच्याउन माग गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् ।
नेकपा एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठक सुरु हुन साथ विशेष समय लिएर बोल्दै प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभा बैठक १ घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन् ।
प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनसाथ नेकपाका प्रदेश सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा र प्रदेश सांसदलाई अपमान गरी स्थानीय तहमा शसर्त अनुदानको बजेट बठाएको भन्दै आपत्ति जनाए । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा शसर्त अनुदान पठाएर प्रदेश सरकारले बहादुरी देखाएको टिप्पणी गर्दै विश्वकर्माले बजेट नसचिए प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखलाई थाहै नदिइ योजना कसरी छनोट भयो', विश्वकर्माले भने, ‘सांसदको एउटा पनि योजना परेको छैन । सरकारले सांसदलाई मुर्ख बनाएर अपमान गरेका छन् । कसकाे सिफारिसमा सरकारले योजना तोकेर बठायो । प्रदेश सरकारसँग इमान्दारीता छैन । सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिवद्धता जनाएर मनलाग्दी गरी अपमान गरेको छ ।’ बजेट शोधन नभए सम्म प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विरेन्द्र सिंहले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा बोलेको कुनै पनि प्रतिबद्धाता पूरा नभएको आरोप लगाए । स्थानीय तहको शसर्त अनुदानको योजना प्रदेश सांसदको सिफरिसमा छनौट गर्ने सहमती विपरित स्थानिय तहलाई योजना पठाएकोमा सांसद सिंहले आपत्ति जनाए । सांसद र स्थानीय तहले छनोट नै नगरी सरकारले योजना लादेको छ', सांसद सिंहले भने,‘स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेश सांसदलाई थाहा छैन । योजना कसले छान्यो ? मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्छ ।’ प्रदेश सांसदले दिएको योजना स्थानीय तहमा नगए सम्म प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नदिने उनले चेतवनी दिए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पटकपटक बचपना प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए । प्रदेश सांसदले दिएको योजनालाई रद्दिको टोकरीमा फालेर सरकारले पार्टीका नेता पाल्ने योजना स्थानिय तहमा पठाएको आरोप लगाए ।
प्रदेशसभा बैठकमा आज 'विनियोजन विधेयक, २०७८ को सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव वाहेक) छलफल' गरी छलफलमा उठेको प्रश्नको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले जवाफ पदने गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ १५:१२
‘मेरी संगिनी’ मोबाइल एप सुरु
एपीआई एप ल्याउँदै खल्ती
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले दियो मेडिकल उपकरण
होन्डा सीबी ३५० बजारमा
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले बोनस सेयर जारी गर्ने